Tag: mhepo mvura nenzvimbo
musha > mhepo mvura nenzvimbo
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Kutenga chitima matikiti mu Europe anogara rinonakidza. Kutanga kwazvose, pana Save A Train tiri nguva dzose kutsvaga rweruzhinji chitima matikiti kwamuri. Isu takaongorora misoro senge mahotera akanaka uye nzendo dzakanaka dzechitima. Asi Hottest nyaya iri muchitima indasitiri ndiyo…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Rail senga ndiyo mhoteredzo-ushamwari nzira kufamba. Inokudza mugumisiro gasi choutsi por kiromita pamusoro njanji senga iri 80% zvishoma pane motokari. Mune dzimwe nyika, zvishoma pane 3% pakufamba zvose gasi choutsi vanobva nezvitima. Idzo chete nzira dzakanyanya kugarisana nharaunda…